Vola sandoka : 300 tapitrisa no tra-tehaka -
AccueilSongandinaVola sandoka : 300 tapitrisa no tra-tehaka
Miparitaka ny vola sandoka eto Antananarivo sy ny manodidina. Fito lahy indray no nahatraran’ny teo anivon’ny polisim-pirenena vola iray alina marobe tsy izy, izay mitentina 60 tapitrisa Ariary ny zoma 27 aprily lasa teo. Nandeha in-droa miantoana ny fisamborana, taorian’ny fikarohana sy ny angom-baovao nataon’ny teo anivon’ity vondron-kery ity noho ny fitarainana maro voarain’izy ireo. Teny Bypass no tra-tehaky ny polisy misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy sy ny SAG (Service Anti-Gang) niaraka tamin’ny vola sandoka mitotaly 40 tapitrisa Ariary ny efa-dahy voalohany. Nitohy teny Ambatolampy indray izany taorian’ny fakana am-bavany ireto farany, ka noraisim-potsiny teny an-toerana ireo telo lahy ambiny, tamin’io andro io ihany tokony ho tamin’ny 07 ora hariva. Tratra niaraka tamin’izy ireo tao amina trano iray efa haolo sy nohidiana varavarana roa samihafa ny vola hosoka tsy mbola voatapaka mitentina 20 tapitrisa Ariary sy ny fitaovana maro isan-karazany fanamboarana izany. Nentina nanaovana fanadihadiana teny amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana avy hatrany moa ireto mpanamboatra sy mpanaparitaka vola tsy izy ireto, ary nongiazana ihany koa ireo entana rehetra.
Amidy 3 000 Ar
Nandritra ny famotorana dia nanambara izy fito lahy ireo fa amidy amin’ny sarany 3 000 Ariary ny iray amin’ireo vola 10 000 Ariary ireo, ka izay mpiara-miombon’antoka sy mpanjifa izany no manaparitaka ireo vola indray avy eo. Raha ny voalaza hatrany, dia eny an-tsena no isan’ny toerana handehanan’ireo vola ireo voalohany. Ankoatra izay, dia hividianana vokatra any ambanivohitra sy any amin’ny faritra, toa ny lavanila sy jirofo ireo vola sandoka haparitaka ireo. Isan’ny mbola mijanona ho misitery sy tsy mety mahafoana ny tranga tahaka ity ny tsy fahafatarana ireo tena ati-doha sy ny mpamatsy ireo fitaovana rehetra ilaina amin’ny fanatanterahana izany. Matetika mantsy, dia tsy miloa-bava hatramin’ny farany ireo tra-tehaka izay mpamita iraka sy mpiray tsikombakomba avokoa hatreto. Raha tsiahivina, dia vao tamin’ny 20 aprily lasa teo ihany koa ny teo aivon’ny polisim-pirenena no nahatratra no nahasarona vola hosoka mitentina 10 tapitrisa Ariary teto an-drenivohitra, ka olona sivy no tompon’antoka tamin’izany izay efa nadoboka eny am-ponja vonjimaika moa ny valo tamin’izy ireo taorian’ny nanolorana ny raharaha teo anatrehan’ny fampanoavana.
Azo antoka ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Notokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina niaraka tamin’ny filohan’ny Antenimeran-doholona, Rivo Rakotovao, omaly, mantsy ny tetezana vaovao tao Farahantsana-Mahitsy. Notanterahina ny fanamboarana sy famitana ity tetezana ity mba ho an’ny ...Tohiny